About Us - Guangzhou Frontop Computer Graphics Teknolojia Co., Ltd.
Ny ekipa manana portfolio-miovaova be dia be avy amin'ny an'arivony Shinoa tetikasa eo an-toerana toy ny Beijing Jianwai SoHo, Zhujiang Newtown, ny Fahatsiarovana ny Fandripahana ny Global Nanjing fanitarana olona manerana an'i Azia sy Pasifika, Afovoany Atsinanana ary Eoropa.
Naorina tamin'ny 2002, Frontop dia nanorina ny departemanta ampitan-dranomasina mba hanitarana ny eran-tsena tamin'ny 2010. Ary Frontop Nanjary iray amin'ireo mpitarika an'ireo trano fijerena orinasa ao Shina. Manana anjara fanompoana misokatra any Beijing, Shanghai, Guangzhou sy Shenzhen. Fitaovana amin'ny manan-talenta sy za-draharaha ekipana 3D visualizers, mpanakanto sy ny sary endrika, miezaka ny hanome ny olona arovany-penitra fanompoana. Amin'ny alalan'ny fampivelarana ny workflow mahomby, dia efa nahazo fahafaham-po sy ny lazany mitombo avy amin'ny mpanjifa.
Manokana eo amin'ny fanompoana ao anatin'izany ny an'ireo trano fijerena an'ireo trano 3D dikan, sarimiaina 3D, multi-haino aman-jery ho an'ny famolavolana SAMPANDRAHARAHAM-PANJAKANA, tena toetrany orinasa trano sy mpanolo, Frontop foana foana fanatsarana ny kalitao sy ny asa fanompoana mba hihaona amin'ny zavatra ilaina sy ny zavatra takiana avy amin'ny mpanjifa.
Ankehitriny dia efa nahazo ny fahatokiana lalina sy ny fiaraha-miasa maharitra eo sasany amin'ireo mpanao mari-trano ambony sy ny endrika anisan'izany 10 Design, Gensler, Aedas, Benoy, DP Architects, BDP, South China University of Technology, Tongji University sns
Architectural Fandikana, 3D Fandikana , 3D Fandikana Visualization , Atitany Fandikana , 3D Atitany Fandikana , China Atitany Fandikana .
No. 18. milina fambolena Institute, No. 261 Wushan Street, District Tianhe, Guangzhou, Shina.
3D Software mba Creat ny dikan